अन्तर्वार्ता – Page2– Peacepokhara.com
You are at :Home»Category: "अन्तर्वार्ता" (Page 2)
महिला र पुरुष दुबैमा हुने आत्मशक्ति हामीमा छ : पिंकी गुरुङ
peacepokhara 08 Jun 20160Views
समूदायको रुपमा भन्ने हो भने हामी कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न थिएनौं । पहिलो संविधान सभा निर्बाचनपछी सुनिलबाबु पन्त नेकपा संयुक्तबाट संविधानसभा सदस्य बन्नुभयो । सुनिल दाई मार्पmत हामी पनि राजनिती प्रति जागरुक बन्दै गयौं । प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमा नलागे पनि हामीले सुनिलदाईलाई सहयोग गर्नु पर्छ भनेर जोड ग¥यौं । धेरै ... Read More »
peacepokhara 25 Apr 20160Views
पोखरा । पोखरेली रङ्गमञ्चको कुनै लिखित इतिहास नभएपनिसाठीको दशकभन्दा अगाडि पोखरेली रङ्गमञ्चका दर्जनौ संस्था रहेका थिए । दिनँहु नाटक मञ्चन पोखरामा हुन्थ्यो पनि । नाटक हेर्न दर्शकको ओईरो उस्तै । वि.स २०६२ भदौमा सिटि हल पोखरामा नाटककार कृष्ण उदासीको नाटक अश्रुज्वाला मञ्चन भयो । त्यसपछाडि पोखरेली रङ्गमञ्च सत्तरीको दशक सम्म ... Read More »
ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख (कुराकानी सहित)
peacepokhara 17 Oct 20150Views
काठमाण्डौ ३० असोज । व्यवस्थापिका–संसद्ले सभामुख र उपसभामुख निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । शुक्रबार दुई चरणमा बसेको संसद् बैठकले एमाओवादी सांसद ओनसरी घर्तीलाई सभामुख र राप्रपा नेपालका सांसद गंगाप्रसाद यादवलाई उपसभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । घर्ती पहिलो महिला सभामुख हुन् । नेमकिपाबाट सभामुख र उपसभामुखका लागि अघि सारिएका अनुराधा ... Read More »
peacepokhara 27 Sep 20150Views
काठमाण्डौ १० असोज । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी एमाओवादी र संसद सदस्य परित्याग गरेका बाबुराम भट्टराईसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी अकस्मात एमाओवादी त्यागको निर्णय गर्नुभयो नि ? झट्ट हेर्दा अकस्मात देखिए पनि मैले यो कुरा धेरै समयअघिदेखि भनिरहेको थिएँ। माक्र्सवादी भाषामा भन्ने हो भने संविधान निर्माण भएपछि पुरानो सामन्तवादी युग सकिएर ... Read More »
प्रेमलाई सेक्सले पूर्णता दिन्छ : ज्योति मगर
peacepokhara 15 Sep 20150Views
सेक्स के हो ? सेक्स प्रेम गर्ने र माया दर्शाउने माध्यम हो । प्रेममा सेक्स कति आवश्यक छ ? प्रेमलाई सेक्सले पूर्णता दिन्छ । सेक्समा तपाईंलाई मन पर्ने क्रियाकलाप के हो ? म ‘फोरप्ले’ धेरै इन्जोय गर्छु । कस्तो अवस्थामा तपाईंलाई सेक्सको चाहना हुन्छ ? त्यो मेरो मुडमा भर पर्ने ... Read More »
‘मधेसीका लागि बिहारमा शरणार्थी शिविर बनिसके’
उपेन्द्र यादव, संयोजक, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तपाईं त आन्दोलनलाई समर्थन जुटाउन इन्डियातिर जानुभयो भन्ने समाचार आएको थियो, अहिले कता हुनुहुन्छ ? तपाईंले अहिले सम्पर्क गर्नुभएको मोबाइल नम्बर (९८४१..) इन्डियाको हो र ? नेपालकै नम्बरमा इन्डियामा कसरी सम्पर्क भयो ? अहिले म किन इन्डिया जाने ? इन्डिया त शेरबहादुर देउवा गएका हुन्, प्रचण्ड ... Read More »
peacepokhara 11 Sep 20150Views
१० कक्षमा पढ्दै गर्दा आफ्ना आमा बाबुको सहयोग र भारतिय पोर्न स्टार सन्नी लियोनीको ब्लु फिल्मबाट प्रभाबित भएकी कञ्चनपुरकी १७ बर्षिय अर्चना पनेरुले नग्न तस्विर खिचाइन् र आफु पनि पोर्न स्टार बन्ने भन्दै सार्वजनिक गरिन् । तर बाबुआमाको साथ पाएपनि छिमेकीले प्रहरीमा उजुरी गरे र आमा सुनिता सहित पक्राउ परिन् ... Read More »
छोरीलाई पोर्नस्टार बनाउन खोज्ने नेपाली आमा यसो भन्छिन् (अन्तरवार्ता)
पोर्न स्टार बन्ने सपना सहित आमा बाबुको सहयोगमा नग्न तस्विर खिचाएर फेसवुकमा पोष्ट गरेकी कञ्चनपुर ३ भासीकी अर्चना पनेरु र उनकी आमालाई प्रहरीले अब आयन्दा यस्तो नगर्ने सर्तमा कागज गराई छाडेको छ । नग्न तस्विर सार्वजनिक भएपछि गाउलेले दिएको रिपोर्टको आधारमा पक्राउ परेका उनिहरुलाई प्रहरीले कागज गराएर छाडेको हो । ... Read More »
peacepokhara 20 Aug 20150Views
जगदिशनरसिंह केसी सभासद तथा नुवाकोट कांग्रेस सभापति यो इन्काउन्टरलाई कसरी लिनु भएको छ ? इन्काउन्टर भनेको के रु इन्काउन्टर भनेको त दोहोरो भीडन्तलाई भनिन्छ । कुमारचाहिँ बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म व्यवसायी रुपमा अफिसमा बसेको थियो । अनि ११ बजे त्यहाँबाट निस्कियो । त्यहाँबाट निस्केपछि उसले बाटामा तरकारी किन्यो । ... Read More »
नगरविकासको आम्दानी दुई गुणा बढाउछु : खनाल
peacepokhara 18 Jul 20150Views
असार २८ गते पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका प्रकाश खनालले साउन ४ गतेदखि कार्यभार सम्हाल्दैछन् । त्यसपछि समितिलाई पूर्णता दिने उनले बताएका छन् । यसअघिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद वास्तोलाको दुई बर्षे कार्यकाल सकिएपछि नियुक्त भएका खनालको भावि योजना के छन् त ? उनले पिसपोखरा डटकमसंग गरेको कुराकानीको संपादित अंश ... Read More »